एमाले १० औं महाधिवेशन बुटवलमा हुने – Pahilo Page
एमाले १० औं महाधिवेशन बुटवलमा हुने
१७ आश्विन २०७८, आईतवार १९:२८ 97 पटक हेरिएको
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को १०औं महाधिवेशन मंसिर १०–१३ सम्म बुटवलमा हुने भएको छ । प्रथम विधान महाधिवेशनको समापनका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनको मिति र स्थान घोषणा गरेका हुन् ।
विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै पारित समेत गरेका छन् । यसअघि एमालेको ८औं महाधिवेशन पनि बुटवलमै भएको थियो ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । विधान महाधिवेशनबाट एमालेको पदाधिकारीसहित कमिटीहरूको संख्या र आकार निर्धारण भइसकेको छ ।
आइतबार सम्पन्न विधान महाधिवेशनले १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने निर्णय गरेको छ । पदाधिकारीहरूमा १ अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव र ७ सचिव सहित २ सय २५ सस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने विधान पारित भएको छ ।
महाधिवेशनबाट सबै नेताहरू निर्वाचित हुनेछन् । एमालेले उम्मेदवार बन्नका लागि योग्यतासमेत निर्धारण गरेको छ । प्रथम विधान महाधिवेशनले डा. बिजय सुब्बाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय निर्वाचन आयोग समेत गठन गरेको छ ।
विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव बिष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव संशोधन सहित पारित गरेको छ ।
सम्पन्न महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेर हदको पनि थप व्याख्या गरेको छ । विधान महाधिवेशनले कुनै व्यक्ति उम्मेदवार चुनाव जितेपछि ७० वर्ष उमेर कटेको रहेछ भने त्यसले पूर्ण कार्यकाल उक्त पदको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्न पाउने व्याख्या गरेको छ । यस व्यवस्थाले अगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीलाई पुन अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न र पाँच वर्षे कार्यकाल निर्वाह गर्न सहज भएको छ ।
नेकपा समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का
थप ७०८ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि, ११ जनाको मृत्यु
इन्जिनियर कुशवाहालाई कालोमोसो दल्ने सिके राउतका १७ जना कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा दर्ता
२२ तोला सुनको बाला र १८ लाख नगदसहित २ जना पक्राउ
आज प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
धनुषाबाट सिके राउतका १० जना कार्यकर्ता पक्राउ
यसरी भयो न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट
आर्यन खानसँग अनन्याको सम्बन्ध के छ ? ड्रग्स प्रकरणमा कसरी जोडियो नाम ?
थप ५४५ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि, ८ जनाको मृत्यु